China Tungsten Carbide Ebu rụpụta na rụpụta | N & D Na-eme Ihe
Ebube Tungsten Carbide
* CIP Enwe
N'ihi na nke a ihe onwunwe na-eguzogide na-eyi na corrosion, sikwuo tungsten carbide enye ogologo-eyi mmiri nwere ike melite n'ozuzu ebu ndụ.
Moldmakers maara na ọtụtụ n'ime ihe eji egbutu ha ka emere site na tungsten carbide iji belata mkpụmkpụ, anyị kwenyere na tungsten carbide nwere ike inye ndị na-akpụzi uru ndị ọzọ mgbe ejiri ha maka akụkụ ebu, ọkachasị isi atụ.
The tungsten carbide ebu akụkụ mere site na otu ma ọ bụ ọtụtụ refractory carbide (tungsten carbide, titanium carbide na ndị ọzọ ntụ) dị ka isi akụrụngwa, na metal ntụ ntụ (cobalt, nickel, wdg) dị ka nrapado ga-akwadebe site ntụ ntụ metallurgy usoro. A na-ejikarị ya eme ihe maka ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa na ngwa ngwa, ihe ndị siri ike na nke ductile, na mmepụta nke oyi na-anwụ, ọ bụghị site na ịlele mmetụta na ịma jijiji nke akụkụ dị elu na-eguzogide ọgwụ.
Banyere nghọta nke akụkụ akụkụ tungsten carbide, ị nwere ike ịmalite site na ịghọta njirimara nke carbide.
1. High ekweghị ekwe, elu eyi eguzogide na elu-acha uhie uhie ekweghị ekwe
2. Ike dị elu na modulus nke elasticity
3. Ezigbo nguzogide corrosion na nguzogide oxidation dị mma
4. Obere ọnụọgụ nke mmụba linear
5. Agakwaghị nhazi na regrinding nke akpụ ngwaahịa
Nke gara aga: Tungsten Carbide efere
Osote: Tungsten Carbide aro aka uwe maka mgbapụta